Maalinta: Juun 29, 2018
Sivas 40 riyada sanadlaha ah iyo 40 kun oo qof ayaa shaqo siin doonta Demirağ abaabulka kaabayaasha dhismaha aagga warshadaha ee heshiiska dhismaha. Gudoomiyaha Gobolka Sivas Hasan Canpolat Hall xafladda saxiixa; [More ...]
Gaadiidka Todobaadka ah ee Shanlahafa waa bilaash
magaalada yaraa Turkey ee degmada Şanlıurfa, isbuucaan lagu qaban doonaa labo kalfadhi oo Waxbarashada Sare Hay'adaha Imtixaan (LDS) ee dhammaan tallaabooyinka-hoosaadka. Goobaha imtixaanka YKS halkaasoo ardaydu ku yeelan doonaan gaadiid dadweyne oo bilaash ah [More ...]
Gaadiidka bilaashka ah ee YKS Ardayda jooga Diyarbakir
Dawlada Hoose ee Magaalada Diyarbakir, 30 Juun Sabti iyo 1 Luulyo Axad ayaa lagu qaban doonaa Imtixaanaadka Hay'adaha Tacliinta Sare (YKS) oo bixin doona adeega gaadiidka dadweynaha lacag la’aan ah saraakiisha iyo saraakiisha. Tacliinta sare usbuucan [More ...]
Basaska Dawlada Hoose ee Adana iyo tareenada dhulka hoostiisa mara, murashaxiinta jaamacadaha, qaraabada iyo baarayaasha ayaa qaadi doona bilaash. Dowlada Hoose ee Magaalada Adana, 30 Juun-1 Luulyo ayaa loo qabanayaa Imtixaanadka Xarumaha Tacliinta Sare (YKS) [More ...]
Adeegga bilaashka ah ee Adeegga Bilaashka ah
Dowladda Hoose ee Antalya, Magaalada Konyaalti Coast si kor loogu qaado gaadiidka dadweynaha 30 laga bilaabo Sabtida ee Juunyo, adeegga giraanku wuu bilaabmayaa. Khadadka 12 ayaa socon doona daqiiqad kasta, gaadiidka dadweynaha [More ...]
Baska iyo Methn Free Free to All Students Ardayda ku soo galeysa YKS ee Ankara
Bas iyo Meel Bilaash ah oo loogu talagalay Ardayda oo dhan inay galaan YKS ee Ankara: Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa Tuna, 30 Juun-1 Luulyo 2018 in lagu qabto Imtixaanadka Tacliinta Sare ee Tacliinta Sare (YKS) ee murashaxiinta ka qeyb galaya [More ...]
Mersin Smart Isticmaalka Ka ilaali qabow iyo qabow
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay bixisaa joogsiyo casri ah, hawo hawo leh oo ka ilaalinaysa deggeneyaasha Mersin kuleylka xagaaga iyo qabowga. Istaroogyada ugu horeeya ee qaboojiyaha-qaboojiyaha-qaboojiyaha lagu dejiyo ee Yaşat İş Hanı ayaa ah adeega shacabka sida ugu dhaqsaha badan. [More ...]
Dawladda Hoose ee Gaziantep waxay sii wadaysaa shaqadeeda xagga gaadiidka iyo balaadhinta wadada iyo buundada. Dawlada Hoose ee Magaaladu rabto inay yareyso qulqulka taraafikada culus; Fidinta buundada Isgoyska Qabuuraha (wadada Silk) si loo yareeyo cufnaanta taraafikada ee wadada Xariir [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay ka shaqeyneysaa inay ka dhigeyso dadka lugeynaya inay si hufan uga shaqeeyaan buundooyinka dadka lugeynaya ee D-100. Wadada D-100 ee loogu talagalay muwaadiniinta gaadiidka dadweynaha si ay si fudud ugu gaaraan buundada lugta lugta [More ...]
Oo sheegaya in Turkey ee tayo sare leh iyo baahida loo qabo in la saraakiisha dowladda Bursa Metropolitan Duqa Alinur Aktas shaqada, ayuu yiri waa in dadka dhallinyarada ah ma ku kalsoon tahay Turkey. Madaxweyne Aktaş, maalinta KPSS ayay u qaadayaan gaadiid bilaash ah imtixaanka [More ...]
Magaalada Bursa, 30 Juun iyo 1 Luuliyo Imtixaannada Goobaha Waxbarashada Sare (YKS) waxay gali doonaan dhammaan ardayda 'gaadiidka dadweynaha' oo ka faa'iideysan doona si bilaash ah. Waxaa loo diyaariyay dhalinyarada jaamacadaha, war wanaagsan ka hor inta aan imtixaanka laga qaadin Dowlada Hoose ee Magaaladda. [More ...]
Gudoomiyaha Gudiga Agaasinka iyo Maareeyaha Guud ee Maamulka Duulista Hawada Gobolka Funda Ocak ayaa booqday gegada diyaaradaha ee Dalaman ee Muğla. Halkan, shaqooyinka dhismaha ee dhismaha cusub ee caalamiga ah ee loo yaqaan 'Terro Station cusub' oo caalami ah ilaa heer ku meel-gaar ah oo aqbalaad ah [More ...]
Dhamaan Basaska oo Bilaash ah YKS Ardayda Malatya
Duqa magaalada Malatya Hacı Uğur Polat oo ku raaxaysanaya ardayda YKS ee imtixaanka fasaxa usbuuca dhamaadka ah, siinaya warka wanaagsan ee ardayda, ayaa sheegay in dhammaan basaska ay qaadayaan ardayda imtixaanka bilaashka maalinta imtixaanka. [More ...]
Tallaabada weyn ee Gaadiidka Alaabada Khatarta ah ee laga helo TCDD
Turkey Cumhuritet Tareennada State (TCDD) Agaasinka Afyonkarahisar xnumx.bölg xarunta Kayacık logistics ee Konya, abuuritaanka alaabada laga soo saaray saliida, LPG-LNG-CNG iyo xarunta keydka saliida macdanta [More ...]